Michael Keating “Culeys kasta oo jira waa in Doorashada waqtigeeda ku dhacdaa | Baydhabo Online
Michael Keating “Culeys kasta oo jira waa in Doorashada waqtigeeda ku dhacdaa
Wakiilka Qaramada Midoobay ee arimaha Somaliya ayaa ka hadlay Doorashada la filaayo inay dalka ka dhacdo sanadkaan gudihiisa iyo taageerada Qaramada Midoobay ay la garab taagan tahay Dowladda Federalka Somaliya.
Keating ayaa Wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay Doorka Qaramada Midoobay inay tahay arimo farsamo iyo tallooyin dhanka Doorashad la xiriira, balse nidaamka iyo habka Doorashada dadban ay u dhaceyso masuuliyadeeda ay leedahay Dowladda Somaliya.
“Kaalinta Qaramada Midoobay waa inay taageerto Geedi socodka Doorasho oo ay leedahay Umadda Somaliyed ayna maareynayso Umadda Somaliyed, Shaqadeena waxa ay tahay inaan bixino taageero Farsamo iyo iyo Talooyin.”
“Balse midda ugu muhiimsan waa inaan ka jawaab bixino waxa ay umadda Somaliyed naftooda ka rajo qabaan inay ka helaan Geedi socodkaan.” Ayuu yri Micheal Keating.Wakiilka Qaramada Midoobay arimaha Somaliya ayaa sidoo kale sheegay waqtiga ay dhaceyso Doorashada in laga doonaayo Guddiga Fulinta Doorashooyinka.
“Dhanka Waqtiga taasi waxaa laga doonayaa Guddiga Fulinta Doorashooyinka inay isla meel dhigaan Ayaga oo raacaya taallaabooyinka loo baahan yahay in la raaco si loo xaqiiyiyo geedi socodka lagu kalsoonaan karo.” Ayuu hadalkiisa sii raaciyay
Keating ayaa sheegay muhiim inay tahay Doorashada inay ku dhacdo waqtigeeda culeys kasta oo jira.
Beesha caalamka ayaa doonaysa in Doorashada Somaliya ay ku dhacdo waqtigii loogu talo galay, iyadoo aysan jirin muddo kororsi loo sameeyo Hay’adaha Dowladda.